Channable: Cuno alaabtaada si aad u qiimeyso shabakadaha isbarbardhiga, kuwa ku xiran, suuqyada, iyo shabakadaha xayeysiinta | Martech Zone
Gaaritaanka dhagaystayaasha halka ay joogaan waa mid ka mid ah fursadaha ugu weyn ee istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn digital ah. Haddii aad iibinayso wax soo saar ama adeeg, daabacaadda maqaal, isku dirka joornaal, ama aad la wadaagayso fiidiyoow - meeleynta walxahaas meesha ay ka hawlgalayaan, dhagaystayaasha khuseeya ayaa muhiim u ah guusha ganacsigaaga. Waa sababta shiidaa madal kasta oo ay leedahay labadaba interface interface iyo mashiin-akhrin kara labadaba.
Dib u fiirinta sanadkaan, xirxirayaashu waxay u rogeen tafaariiqda iyo ecommerce hoos. Rob Van Nuenen, Maamulaha Channable iyo e-commerce khabiir, wuxuu bixiyaa aragtida soo socota ee khalkhalka:
Lebenka iyo hoobiyeyaashu waxay fureen dukaan haddii aysan horay u joogin khadka tooska ah. Layaabka ayaa ahaa sida dhakhsaha badan dukaamo yaryar ayaa soo baxay iyo cida milkiilayaashu ahaayeen - dhawaanahan bilaa shaqo ama iibiyeyaal aan shaqo hayn oo abuuraya dukaamo alaab baahi loo qabo si ay awood ugu yeeshaan inay sii wadaan mushaharkooda.
Dukaamada internetka ayaa ah kala wareejinta kanaalada taas oo ay ku iibiyaan - adduunka oo dhan
COVID waxay u ahayd wicitaan baraarujin ah iibinta bulshada - haddana waxaa loo tixgeliyaa kanaal loo baahan yahay
Kanaallada internetka sida Google ayaa FUR u ah taageerida bulshada maxalliga ah iyadoo dadka iibsada ay ka dhigayaan kuwo maxalli ah
Barnaamijkiisa, Fududeyn kara, waa madal caalami ah e-commerce oo awood siisa suuqgeeyayaasha dijital ah, noocyada, iyo dukaamada internetka si ay uga adkaadaan caqabadahaas iyo fursadahaas.
Waa Maxay Quudinta Badeecadu?
Quudinta badeecadu waa feylal dijitaal ah oo ay kujiraan xarig xog xogeed oo alaabooyin badan leh. Cunnooyinka wax soo saarka ayaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo xogta waqtiga dhabta ah e-meheraddaada ama barxadda alaabada dibadda ee nidaamyada kale - oo ay ku jiraan maareynta ku-xirnaanta, boggaga suuqgeynta iimaylka, warbaahinta bulshada, barnaamijyada e-commerce, iyo / ama maareynta maareynta xayeysiinta.
Fududeyn kara: Ku iibi alaabtaada Meel kasta
Fududeyn kara waxay bixisaa aalad khadka tooska ah loogu talagalay wakaaladaha suuq geynta iyo tafaariiqleyda internetka si ay ugu diraan wax soo saarkooda ama adeegyadooda suuqyo kala duwan, matoorada isbarbar dhiga, iyo barxadaha ku xiran. Iyada oo la adeegsado Channable, ganacsiyada si fudud ayey u shaandheyn karaan, u dhammaystiri karaan, uguna fiicnaan karaan macluumaadkooda wax soo saar si ay u gaaraan natiijooyin wanaagsan. Barxadda ayaa markaa u dirta macluumaadka la hagaajiyay kanaal kasta oo dhoofinta ay doortaan (tusaale ahaan Amazon, Shopping.com, ama Google).
Waxyaabaha Maareynta Quudinta ee Channable Ay Kujiraan
Kala soocida alaabada fudud - Qalabka maareynta quudinta ayaa kuu oggolaanaya inaad abaabusho alaabadaada si aad ugu habboonaato qaybaha kanaalka dhoofinta. Iyada oo la adeegsanayo Channable, waxaad isla markiiba abuuri kartaa qaybo adoo adeegsanaya kala soocid caqli badan oo ka mid ah kuwa ugu caansan ee xayeysiinta. Nidaamkani wuxuu si weyn u dardargelin karaa aasaaska quudinta cusub, wuxuu kordhin karaa muuqaalkaaga kanaalka, wuxuuna kordhin karaa gaadhistaada.
Awood haddii-markaa-xeerar - Caadi ahaan, waxaad u baahan lahayd horumariye si aad u cusboonaysiiso quudinta sheygaaga. Iyada oo taageero ka heleysa qalabka maaraynta quudinta, fududaan haddii-markaa-qawaaniintu kuu oggolaanayaan inaad 'koodh' naftaada. Xeerarkan ayaa sidoo kale lagu dabaqi doonaa alaabooyin cusub oo lagu soo kordhiyay dukaankaaga internetka. Waxaad si sax ah u xakameyn kartaa qulqulka badeecooyinka ee marin kasta oo dhoofis ah isla markaana wax ka beddeli kartaa macluumaadka isla waqtigaas. Qalab wanaagsan oo maareynta quudinta ayaa ku siin doonta jawaab celin deg deg ah ka dib sharci kasta oo lagu dabaqo buugaaga alaabadaada.
Xog tayo sare leh ayaa quudisa - Dhoofinta tayo sare leh, oo sifiican u caafimaad qaba quudinta xogta ayaa markaa kordhin doonta muuqaalkaaga internetka. Guud ahaan, waxaad ubaahantahay inaad iswaafajiso 'meelaha' ay kujiraan macluumaadka sheyga ee quudintaada soo dejinta iyo 'meelaha' loo baahan yahay ee quudinta dhoofinta la doonayo. Qalab maareynta quudinta ayaa yaqaana dhamaan qeexitaannada quudinta ee marinnada isku dhafan waxayna la socon doonaan isbeddelada iyo cusbooneysiinta.
Quudinta & API-yada - Adiga oo gacanta ku hubinaya in macluumaadka badeecada la soo dhoofiyey, sida keydku, uu ahaado mid sax ah waxay qaadan kartaa waqti badan. Qaar ka mid ah suuqyada waxay bixiyaan isku xirnaanta API-ga ah dukaankaaga internetka kaas oo awood u siinaya is-weydaarsi macluumaad oo otomatig ah oo isdaba-joog ah oo u dhexeeya labada madal Qalabka maareynta quudinta ayaa soo dejin kara xogtaada quudinta xilliyada caadiga ah si loo hubiyo in liisaska wax soo saarkaaga iyo macluumaadkaaga dhabarka ay la jaan qaadayaan kanaalladaada dhoofinta.
Channable ayaa hadda laga soo dhoofiyaa Lightspeed, Shopify, ecManager, Magento, CCVShop, Divide.NOW, WooCommerce, Mijnwebwinkel, inRiver, PrestaShop, Shopware, BigCommerce, iyo inbadan. Dalabyo la heli karo in ka badan 2500 shabakadaha isbarbar dhiga qiimaha, shabakadaha gacansaarka la leh, iyo suuqyada loo dhoofiyo.
Tags: maareynta xayeysiinta maamulkaku xirnaanta quudinta sheygaamazon feed feedCCVShopla marin karochannelsCOVID-19Qaybi.HADAecManagerecommerceecommerce quudintaquudinta sheyga ecommerceku soo dir iimaylka wax soo saarka suuqgeyntamaaraynta quudintagoogleka -baxlightspeedmagentoMijnwebwinkelppc wax soo saarkaPrestaShopquudinta sheygamaaraynta quudinta badeecadaRob Van NuenendukaankaDukaanwarbaahinta bulshada feed feediibinta bulshadawoocommerce